Fitaratra anti-glare, fitaratra AG sy fitaratra - vera ChinaGG
Fitaratra tsy maditra koa antsoina hoe fitaratra AG na ny fitaratra anti-glare, fitsaboana simika manokana amin'ny velaran'ny fitaratra.ny fitaratra fisaintsainina dia lasa fisaintsainana mifototra aorian'ny fanodinana, lasa mivaona ny sary feno taratra. Mihena ny reflexina maivana, ataovy ny taratry ny hazavana dia 8% ka hatramin'ny 1%, ny vokatry ny fiantohana ny zavatra miloko marevaka, ny ture ary ny fiarovana ny maso, fitaratra an-glare amboary ny sary na hoso-doko tsara indrindra raha mampihena ny glare sy miaro amin'ny hamandoana sy ny rantsan-tànana.
Ny ankamaroan'ny olona dia mahita fanandramana feno fijaliana, izay avy amin'ny trano jiro mamirapiratra ary taratry ny dazzle, Rehefa miasa alohan'ny hanaraha-maso isika indraindray, sarotra indraindray ny mamaky ny votoatin'ny monitor noho ny taratry ny tontolo manodidina amin'ny monitor.Ny antony dia eo amin'ny fandinihana ny hazavana ao amin'ny fitaratra, fa ny fitaratra mazava dia manana taratra be dia be, mba hanalefahana ny fitarihan'ny tara-pahazavana, dia manao fikarakarana eny amin'ny tany izahay mba hahitana ny tsy taratry ny saina na hampihena ny fandinihana.
Ny fitaratra anti-glare dia mety hampihena ny fitarihan'ny jiro manodidina, hanatsara ny haben'ny hita maso sy ny haavon'ny fanaraha-maso maivana, ary mampihena ny fandinihana, Amin'izany fomba izany, ny sary dia lasa mazava kokoa, maro loko kokoa ary ny saturation tsara indrindra.
♦ Miaro ny mangarahara maivana ary mampihena ny fikorontanan'ny saina.
♦ Ampio ny zoro fahitana sy ny vokatry ny zavatra, ataovy mazava tsara ny sary.
♦ Manohitra ny taratra, miaro amin'ny maso, manala ny havizanana.
♦ Ny fanoherana an-tsokosoko, tsy misy fiarovana hafa
HuiHua dia namorona karazana endrika ivelany telo amin'ny fitaratra tsy glare, satin etch, tsara tarehy volom-boasary makirana ary soratra matanjaka an'ny volomboasary
Satin etched fitaratra tsy voaravaka
Peel Orange Peel Non Glare Glass be dia be
Kely matevina Peel antsoina hoe Peel Non Glare Glass